Archive du 20190809
Fitantanan-draharaham-panjakana Misy olona tsy voafehin-dRajoelina
Misy olona toa manana fahefana be tsy hay tohaina ao anaty fanjakana ao amin’izao fotoana, ary tena mampiteny ny anarany ! Fianakaviana olona ambony sy tena akaiky olona ambony eto amin’ny firenena izy io.
Antananarivo Renivohitra Iza no ho kandidàn`ny IRD ?
Iza ary no ho kandidàn’ny vondrona IRD (Isika miaraka amin`I Andry Rajoelina) ho ben`ny tanànan` Antananarivo Renivohitra ?
Fifidianan ben`ny tanàna 45 miliara ariary ny tetibola ilaina
Nitentina 23 miliara ariary ny tetibola nayoakan`ny fanjakana ho an`ny fifidianana ben`ny tanàna ny 21 jolay 2015.
Biletà tokana Hatonta eto Madagasikara amin’izay ?
Mety hiakatra 60 miliara ariary ny fanotana ireo biletà tokana ampiasaina amin`ny fifidianana ben`ny tanàna. Biletà roa isaky ny mpifidy mantsy no ampiasaina raha oharina amin`ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka.
Hetsi-panoherana ny hosoka sy hala-bato Haparitaka manerana ny Nosy
Miantso hatrany ny hery velona rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny olom-pirenena tsirairay mba hiara-mientana hamongotra ny mety ho antony rehetra tsy hisian'ny mangarahara amin'ny fifidianana ny Hetsikin'ny Olom-pirenena Miady amin'ny Hosoka sy ny Hala-bato
Antoko mpanohitra Hanao fivoriambe rahampitso
Rahampitso sabotsy 10 aogositra manomboka amin'ny 9 ora sy sasany no hatao ny fivoriam-be voalohan’ny mpanohitra, izay hatao eny amin’ny Hotel Carlton Anosy,
Praiminisitra Ntsay Christian “Mila hatsaraina ny fampidiram-bolam-panjakana”
Tokony hisy ny fanovàna eo amin’ny fomba fitantanana indrindra fa ity ministera ity, izay miandraikitra ny fitantanana sy ny fampidiram-bola ao anatin’ny kitapom-bolam-panjakana
Basket BIG SÔMA 3x3 2019 Hangotraka ny fety any amin’ny torapasik’i Sôma Beach
Azo antoka fa hangotraka indray ny fetin’ny basikety ao amin’ny torapasik’i Sôma Beach any Mahajanga manomboka anio zoma 09 sy rahampitso sabotsy 10 ary amin’ny alahady 11 aogositra amin’ny
Faneva Andriatsima Malaina hiala ao Frantsa
Taorian'ny fahataperan'ny fifanarahany tao amin’ny Clermont Foot 63 dia mbola mitady izay klioba handray azy indray ny kapitenin'ny Barea,
Politikam-pampandrosoana ny firenena Tsy misy azo antenaina hatreto…
Ny 80% amin’ny Malagasy dia tantsaha avokoa, izany hoe eny ambanivohitra. Mirona kokoa amin’ny politikan’ny tanàn-dehibe sy ny mamirapiratra ny fitondram-panjakana.
Fampiasana fanafody tsy manara-penitra Handray fepetra hentitra ny fanjakana
Manomboka mirongatra ny tsy fahombiazan’ny fampiasana fanafody amin’ny fitsaboana eto amintsika.
Olona misandoka ho dokotera Zazakely iray vao 15 volana monja no lasa jamba tsy fidiny
Mihamahazo vahana hatrany ireo olona misandoka ho dokotera eto amintsika. Fianakaviana iray indray no lasibatra tany amin’ny faritra, nanana zanaka vao 15 volana monja tratry ny areti-maso.